China Broad Spectrum Dewormer Veterinary Medicine ho an'ny alika sy alika kely Fenbendazole Tablet orinasa sy mpamatsy | Weierli
Fonosana: Takelaka 20
Fitehirizana: Fivarotana ambanin'ny 25 ℃
Zava-dehibe: Fenbendazole, Praziquantel, Pyrantel Pamoate
Fitsaboana: Kongo 5 x boribory, kankana 5 x, kankana 4 x, karazan-trondro 1x
♦ Mifehy ny kankana, kankana, kankana ary kankana amin'ny alika. Ny fahatsapana be loatra amin'ny fangaro mavitrika na excipients. Aza ampiasaina miaraka amin'izay miaraka amin'ny vokatra toy ny organophosphates na piperazine compound.
♦ Ity dia fanafody fitsaboana Spormum Dewormer Broad Spectrum. Ny takelaka tsirairay dia misy Fenbendazole 500mg, Praziquantel 50mg, pyrantel pamoate 144mg.
Alika kely sy alika kely mihoatra ny 6 volana (MASS)
Lanjan'ny alika (kilao) Takelaka
0,5-2,5kg 1/4 takelaka
2,6-5kg 1/2 takelaka
6-10kg Takelaka 1
Alika antonony (MASS)
11-15kg Takelaka 1
16-20kg Takelaka 2
21-25kg Takelaka 2
26-30kg Takelaka 3
Alika lehibe (MASS)
31-35kg Takelaka 3
36-40kg Takelaka 4
♦ Ny Worm Rid dia entina am-bava na mivantana na afangaro amin'ny ampahany amin'ny hena na saosisy na afangaro amin'ny sakafo. Tsy ilaina ny refin'ny sakafo amin'ny fifadian-kanina.
♦ Ny fitsaboana matetika ny alika olon-dehibe dia tokony hokarakaraina ho toy ny fitsaboana tokana amin'ny taha 5mg, pamoate pyrantel 14,4mg ary fenbendazole 50 mg isaky ny lanjan'ny vatana (mitovy amin'ny 1tablet isaky ny 10kg).
♦ Na dia voasedra be aza io fanafody io amin'ny toe-javatra maro samihafa, dia mety hitranga ny tsy fahombiazany noho ny antony maro. Raha ahiahiana ity dia mitadiava torohevitra momba ny biby ary ampandreneso ny tompon'ny fisoratana anarana.
♦ Aza mihoatra ny fatra voalaza rehefa mitsabo mpanjakavavy bevohoka, azo antoka ampiasaina amin'ny biby mampinono.
Teo aloha: Factory Outlets China Msm ho an'ny fahasalamana alika alika
Manaraka: Fandefasana vaovao ho an'ny famokarana ozinina any China Fenbendazole fitsaboana vermifuge mivantana
Orinasa Broadorm Dewectrer Broad Spectrum
Mpamatsy dewormer OEM
Dewormer ho an'ny alika
mpamatsy fanafody biby fiompy
Pyrantel Dewormer ho an'ny alika
Fiatoana amin'ny fihenan'ny hena biby
Dewormer ho an'ny biby (Wormer Clear)
20% vovoka azo afangaro amprolium